Shiinaha Dhismaha wershedda qorshaha biyaha iyo korontada iyo soo saarayaasha | Zhenyuan
Oo ay ku jiraan dalab biyo (sawirka dhismaha dhismaha biyaha iyo dheecaanka) iyo codsi koronto (sawirka dhismaha dhismaha korantada), oo si wada jir ah loogu yaqaan sawir gacmeedka dhismaha biyaha. Sawirka dhismaha ee bixinta biyaha dhismaha iyo bullaacaddu waa mid ka mid ah qaybaha hal mashruuc oo mashruuca injineernimada. Waa aasaaska ugu weyn ee go'aaminta kharashka mashruuca iyo abaabulidda dhismaha, iyo weliba qayb lama huraan u ah dhismaha ....
Naqshadeynta biyaha iyo korontadu waa badbaado, wax ku ool ah dhammaanteed, waa saameyn qurxoon oo soo socota Mabda'a biyaha iyo nashqadeynta korontadu waa inay awood u leedahay inay dhaqaaqdo, si fudud ha isku beddelin; haddii ay mugdi noqon karto, wey madoobi doontaa. Khadad dhalaalaya looma oggola.
Stylist wuxuu rabaa iyadoo la raacayo duruufaha gaarka ah ee guriga ka jira, riix amaan → ilaalinta deegaanka → keydinta tamarta → wax ku ool ah order amarka ay saameynta noocaas ah ka fiirsan doonto, waxay dooneysaa in dhulka ugu sarreeya uu qanciyo dalabka milkiilaha.
Marka loo eego shuruudaha hawsha naqshadeynta, sawirka dhismaha ee bixinta biyaha dhismaha iyo dheecaanka waa inay kujiraan sawirka qaabeynta (qorshaha guud, qorshaha dhismaha), sawir qaadista nidaamka, sawir faahfaahsan dhismaha (sawir muunad weyn), naqshadeynta iyo sharaxaadda dhismaha iyo liiska qalabka ugu muhiimsan, iwm.
Qorshaha biyo bixinta iyo dheecaanku waa inuu muujiyaa qaabka biyaha iyo dhuumaha bullaacadaha iyo qalabka.
Biyo-gelinta gudaha iyo bullaacadaha waa in loo adeegsadaa in lagu go'aamiyo tirada qorshayaasha dhulka. Dabaqa hoose iyo qaybta hoose waa in la rinjiyeeyaa; Haddii dabaqa kore uu leeyahay haamo biyo iyo qalab kale, sidoo kale waa in si gooni ah loo sawiraa; Noocyada, tirada iyo goobaha dhexdhexaadinta sagxadaha dhismaha, sida nadaafadda ama qalabka biyaha, waa isku mid waxaana loo dejin karaa qorshe caadi ah; Haddii kale, waa in lagu sawiraa sagxad dhulka. Noocyo badan oo dhuumaha ayaa lagu sawiri karaa qorshe. Haddii dhuumaha ay adag yihiin, iyaguna si gooni ah ayaa loo jiidi karaa. Mabda'a ayaa ah in sawirada ay si cad u muujin karaan ujeedka nashqadeynta halka tirada sawiradu ay yartahay dhuumaha iyo qalabka waa in lagu muujiyaa qorshaha, yacni dhuumaha waxaa matalaya xariiq dhumuc leh, inta soo hartayna waa khadadka khafiifka ah. Qiyaasta qorshaha dhulka wuxuu guud ahaan la mid yahay kan qorshaha dhismaha. Qiyaasta inta badan la isticmaalo waa 1: 100.
Qorshaha biyaha iyo dheecaanku waa inuu muujiyaa waxyaabaha soo socda: nooca, tirada iyo goobta qolka iyo qalabka biyaha lagu isticmaalo; Dhammaan noocyada dhuumaha shaqeeya, qalabka dhuumaha, qalabka nadaafadda, qalabka biyaha, sida sanduuqa dabka dhaliya, madaxa damiya, IWM, waxaa metelaya halyeey; dhexroorrada iyo dhaadhaca dhammaan noocyada dhuumaha waaweyn ee jiifka ah, tuubooyin toosan iyo dhuumaha laanta waa in la calaamadeeyaa Dhammaan dhuumaha waa in la nambarro oo la muujiyaa.
Sharaxaadda sawirrada koronto-dhalinta:
Waa sawirrada qaab-dhismeedka gaarka ah iyo goobta nidaamka biyo-gelinta, nidaamka bullaacadaha iyo qalabka korontada, jihada siligga iyo nalka guriga, waana aasaaska dhismaha biyaha iyo korontada guriga.
Dhismaha Qorshaha Biyaha iyo Korantada
Sawir adag oo hadda jira1
Sawir bixinta biyaha
Sawir xoog leh oo hadda socda 2
Hore: Fasalka Meelaha Birta ah
Xiga: Qaab-dhismeedka Net, Fasalka Qaab-dhismeedka Jinsiga
Kheyraadka Aadanaha Iyo Naqshadeynta Naqshadeynta